Products > Chiral compounds
Kuchengetedza inyanzvi ye geometric yemamwe molecules uye ions. A chiral molecule / ion haisi yepamusoro pairi mirror image. Kuvapo kwechimwe chekemikari chakakosha kune imwe yenhengo dzakasiyana-siyana dzinoita kuti chirwere chiri muhupenyu uye zvisingaenzaniswi.
Enantiomers mumwe nomumwe anowanzosarudzwa seanotsigira kurudyi kana kuruboshwe. Chirwere chinhu chinokosha kunyanya kukurukurirana nezve stereochemistry muzvigadzirwa uye inorganic chemistry. Iko pfungwa ndeyekukosha kwakakosha nokuti vazhinji biomolecules uye mishonga chiral.
Vakawanda biologically vanoshandiswa mamolekari chiral, kusanganisira nemaitiro anowanzoita amino acids (chivako cheproteins) uye shuga. Muzvigadzirwa zvehupenyu, dzakawanda zvezvikamu izvi ndezvechirwere chimwechete: akawanda amino acids inototatory (l) uye mashuga ari ekutenderera (d). Zvinyorwa zvinowanzoitika zvinokonzerwa ne-l-amino acids uye dzinozivikanwa semashiripiti akadzivirira; iyo yakafanana rarer d-amino acids inobereka mapuroteni ane simba.
Kuratidza zvose 4 zvawanikwa